प्रहरी दाइ, साँच्चै मेरो साथी बन्ने हो? - गजु Real - साप्ताहिक
आजकाल देशमा एउटा नारा निकै चर्चित छ, ‘प्रहरी मेरो साथी ।’ रेडियो, टिभी, पत्रिका, अनलाइन, सडक, गल्ली, चोक सबैतिर ‘प्रहरी मेरो साथी’ले छपक्कै ढाकेको छ । प्रहरीको यो ‘आक्रामक’ अभियान देख्दा खुसी र हाँसो एकै पटक उत्पन्न हुन्छ । आउनुहोस्, आज यही विषयको गजुरीयल विश्लेषण गरौं । ‘प्रहरी मेरो साथी’ नारामा खुसी यो अर्थमा कि हिजो रमेश खरेलहरूले प्रहरी संगठनलाई साँच्चै हाम्रो साथी बनाएका थिए । आज सर्वेन्द्र खनालहरूले जनतामा सुरक्षाको बलियो अनुभूति गराएका छन् । भोलि अरू नयाँ सिपाही/अफिसरहरूले यो नारालाई व्यवहारमा लागू गर्नेछन् ।
प्रकाशित :श्रावण ३०, २०७३
पीडालाई प्रवेश निषेध छ वैशाख ६, २०७५
रुनुहोस् मदन दाइ, पीडाको पोखरी सुक्ने गरी... चैत्र २५, २०७४
मुख्य समाचार के–के हुन् ? चैत्र १७, २०७४